အာဏာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းဖို့ ပြည်နယ်ပြည်မပေါင်းစည်းရေး ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲ — မြန်မာဌာန
အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအပေါ် ပြည်တွင်းပြည်ပ ဖိအားပေးမှုတွေများလာနေချိန်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သဘောထားတွေကကော ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရန်ကုန်တိုင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးအဖြစ် ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ ဒေါ်ထုမေက တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို ပြည်မနိုင်ငံရေးသမား တွေ အသိအမှတ်ပြုဖို့လိုတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ဒီအချိန်မှာ ရုန်းထွက်မယ်ဆိုရင် တနိုင်ငံလုံးညီညွတ်ဖို့ လိုပါမယ်။ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားများရဲ့ အခွင့် အရေးများကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ရုန်းထွက်တဲ့ပုံစံမျိုး နဲ့ ပြည်မ နိုင်ငံရေးသမားတွေရော၊ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးသမားတွေရော အတူတူ ရုန်းထွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၅ နှစ်တာ ဒီ အရပ်သားအစိုးရလက်ထက်မှာ ကျမတို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရင် တခါမှ မကြုံဖူးခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်းစစ်လိုမျိုး ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုး မှာ အရပ်သားအစိုးရအနေနဲ့ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကို အတိုင်းအတာတခုထိ ယုံကြည်ချက်တွေ အားနည်းတဲ့အခြေအနေကို အခု တွေ့ နေရတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်မ လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှာ တခြားသော တိုင်းရင်းသားများ ပါဝင်ဖို့က ကျမတို့ တိုင်းရင်းသားများအခွင့်အရေးကို ဘယ်လောက်ထိ ကာကွယ်ပေးမလဲဆိုတာ မူတည်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပြည်မနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ ပြတ်သားဖို့လိုပါမယ်။ ဒါမှသာ တိုင်းရင်းသားတွေ စည်းစည်းရုံးရုံး နဲ့ ဒီ CDM လှုပ်ရှားမှု မှာ အတူတကွ ပါဝင်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး ပါဝင်လိုက်ခြင်း အားဖြင့် စစ်အာဏာသိမ်းခြင်းကို အဆုံးသတ်နိုင်မယ်၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကို ဦးတည်နိုင်မယ်လို့ ကျမ ယုံကြည်တယ်ရှင့်။”
ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ မနမ်တူးဂျာ ကတော့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို သူတို့စောင့်ကြည့် နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့က ဒီလိုဖြစ်လာမယ်လို့ မမျှော်လင့်ဘူး၊ ဒါကို နှစ်ဖက်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေ ခေါင်းဆောင်တွေက စောစောစီးစီးထဲက ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ ဖြေရှင်းနိုင်ရင် ဒီအဆင့်ထိ ရောက်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ အခုဟာက ဒီလိုမလုပ်တဲ့အခါကျ ဒီအဆင့်ထိ ရောက်လာတာ။ ကျနော်တို့ပါတီကတော့ ကိုယ့်ရဲ့အနေအထား ကိုယ့် ပေါ်လစီအတိုင်းဘဲ ကိုယ့် stand နဲ့ ကိုယ်ပါပဲ။ ကျနော်တို့ကတော့ ကြားနေပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ပါတီကိစ္စ ကိုယ်လုပ်တယ်၊ ပြည်သူတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကလဲ အများကြီးပေါ်လာတယ်။ အဲဒါကို ကျနော်တို့ စောင့်ကြည့်နေတယ်။”
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးစိုင်းလိတ် ရဲ့ သဘောထားကကော ဘယ်လိုရှိပါသလဲခင်ဗျာ။
“လက်ရှိ CDM အနေအထားက အားရစရာကောင်းနေတာပေါ့၊ ဒီအတိုင်းသာ ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် ဝန်ထမ်း အကုန်လုံးကလဲ တာဝန်သိသိ နဲ့ ဒီ CDM ကို ဝိုင်းဝန်းကြမယ် ဝန်းရံကြမယ် အတူတကွ ရင်ဆိုင်ကြမယ်ဆိုရင် အာဏာရှင်စနစ်က လုံးဝပြုတ်ကျမှာပဲ။ ကျနော်တို့အားလုံး လိုချင်တာက အဲဒီအခြေအနေ တခုဘဲလေ။ အာဏာရှင်စနစ် ပျက်သုန်းရမယ်။ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပျက်စီးရမယ်၊ ကျနော်တို့ အားလုံးလိုချင်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက်ရေးကို ဦးတည်နိုင်မယ်။ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေ ရနိင်မယ်။ ဒါတွေက လွယ်လွယ်နဲ့တော့ မရဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ ဒီတိုင်းပဲ ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ပန်းတိုင်ကို မလွဲဧကန်မုချ ရောက်ရမယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်။”
တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်အားလုံးက ပြည်နယ်ပြည်မ ပေါင်းစည်းရေးအတွက် သူတို့ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေကို ပြည်မနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေက လေးစားအသိအမှတ်ပြုဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
Everyone should know that NLD was heading toasystem of federation. In NLD period, army was controlling the department of internal affair and prosecuting everyone inaway they like. NLD had no chance to make any decision forachange which everyone in Burma waiting, withoutaproof from military side. We all love everyone in Burma. We never seperate our people no matter what nationality they are. I think all ethnic groups must unite CDM withoutadoubt. So that, we all can move towardsasystem of federation in Burma